‘फैसलाको आलोचना अदालतको अवहेलना होइन’ – Etajakhabar
‘फैसलाको आलोचना अदालतको अवहेलना होइन’
काठमाडौं, २६ पुस । अदालतको अवहेलना अभियोग लगाइएका प्राडा गोविन्द केसीसँग मंगलबार बयान लिइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बयान सकिएपछि उनलाई बुधबार फेरि हाजिर गराउने गरी न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ । केसीलाई मंगलबार बिहान नौ बजे नै सर्वोच्चमा उपस्थित गराइए पनि साढे १ बजेपछि झन्डै तीन घण्टा बयान लिइएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र र केदार चालिसेको संयुक्त इजलाससमक्ष भएको बयानमा केसीले अदालतको सम्मान गरेको दाबी गर्दै अवहेलनामा प्रधानन्यायाधीशलाई नै कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘निज (प्रधानन्यायाधीश) बाटै अदालतको अवहेलना भएकाले निजउपर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने हो । म उपर लगाएको आरोप झुटा हो। मैले अदालतको अवहेलना गरेको छैन,’ केसीले बयानमा भनेका छन्, ‘निज सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याई कारबाही गरे न्यायालयको गरिमाको वृद्धि हुन्छ । अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र बन्छ ।’
तर, उनले प्रधानन्यायाधीशबाट के कुन प्रकरणमा अदालतको अवहेलना गरेका हुन् भनेर जवाफमा खुलाएका भने छैनन्। उनले जवाफमा अदालतप्रति सम्मान रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘के-कति आधार र कारणबाट यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ? ’ भन्ने एक सवालमा केसीले उल्टै प्रधानन्यायाधीशप्रति आरोप लगाएका हुन्। ‘सम्मानित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गर्नुभएको कतिपय निर्णय र कार्यले न्यायको मानमर्दन भएकाले मैले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको हुँ,’ उनले जवाफमा भनेका छन् ।
केसीलाई अदालतले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्याय सम्पादन गर्छ भन्ने विषय थाहा भए/नभएको, अदालतको आदेश फैसलाप्रति घृणा सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने/नहुने, सजायसमेत हुने विषय थाहा भए/नभएको विषयमा पनि सोधिएको थियो । केसीले अदालतको अवहेलनामा सजाय हुन्छ भन्ने विषयमा आफूलाई थाहा भएको बताएका छन् । ‘सही न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशहरूलाई म सम्मान गर्दछु । अदालतलाई घृणा हुने अभिव्यक्ति मैले दिएको छैन,’ उनले भनेका छन् ।
सोमबार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ‘भ्रष्ट’ र ‘माफिया’ को आरोप लगाएको विषयमा सोधिएको एक सवालमा उनको जवाफ छ, ‘गलत निर्णय र कार्य गर्ने न्यायाधीशबारे बोल्दा अदालतको अवहेलना होइन सम्मान मिल्छ ।’
अदालतप्रति अशिष्ट र अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएको विषयमा उनले आफू भावनामा बगेर नबोलेको र आफ्नो प्रयासले अदालत र जनमानसमा राम्रो प्रभाव परोस् भन्नका लागि बोलिएको दाबी गरेका छन्। अशिष्ट र लाञ्छनायुक्त प्रश्नलाई उनले अस्वीकार गरेका छन् । त्यस्तै, सचेत नागरिकको हैसियतमा स्वस्थ आलोचना गरी अदालतलाई घच्घच्याउने काम गरेको भनाइ उनको छ । ‘अदालतको मुद्दामा तपार्इंले नै भनेबमोजिम फैसला हुनुपर्छ भन्ने हो ? सर्वोच्च अदालतको आदेश फैसलाप्रति किन असहिष्णु हुनुभएको हो ? ’ भन्ने एक सवालको जवाफमा केसीले न्याय सम्पादन राम्रो हुनुपर्ने र न्याय सबैले पाउनुपर्ने सन्दर्भसहित अघि भनेका छन्, ‘न्यायमा विकृति भित्रिएको देखेर शुद्धीकरणका लागि बोलेको हुँ। सही फैसला आएको भए आलोचना गर्नुपर्ने थिएन। फैसलाको आलोचना गर्नु अदालतको अवहेलना होइन ।’
उनले अदालतबाट भएको आदेशमा निजी मेडिकल कलेजले प्र श्रय पाउने, गुणस्तरहीन स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति विसंगतिका कारण नागरिकको स्वास्थ्य र जिउधनप्रति खेलबाड भइरहेको स्थितिमा त्यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध लड्नु कर्तव्य रहेको पनि बताएका छन् । ‘मेरो भनाइ गलत निर्णय दिने न्यायाधीशविरुद्ध हो, न्यायालयविरुद्ध होइन,’ उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीशको नागरिकतासम्बन्धी विवाद, चूडामणि शर्माको राजस्व छली प्रकरण, आयल निगम प्रमुखको कारबाही रोक, एनसेलको लाभकर फिर्ता प्रकरण, भूमाफिया र नातावादसम्बन्धीलगायत क्रियाकलापले न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई चुनौती दिएको दाबी उनको छ ।
केसीले अनशनमा बसेका कारण मुटुको धड्कन बढेको र छाती दुखेको पनि बयानमा खुलाएका छन्। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले बयान सकिएपछि केसीलाई इजलासको आदेशअनुरूप स्वास्थ्यस्थिति अनुकूल हुने गरी जुडिसियल कस्टडी (न्यायिक हिरासत) मा पठाइएको जानकारी दिए ।
‘उहाँलाई चिकित्सकको रेखदेखमा सुविधाजनक रूपमा राखी बुधबार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश भएको छ’, कालाखेतीले भने । आदेशलगत्तै केसीलाई प्रहरीको एम्बुलेन्समा राखेर वीर अस्पताल लगिएको थियो। केसीसँगै रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रातभर चिकित्सकको निगरानीमा अस्पतालमै राखेर त्यहीँबाट बिहान सर्वोच्चमा लगिने जानकारी गराए। बुधबार प्रारम्भमा सर्वोच्च अदालततर्फका कानुनविद्ले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि केसीको बचाउमा सुनुवाइ भएपछि इजलासले निर्णय दिनेछ । केसीलाई पक्राउ गरिएपछि देशभर त्यसको बिरोधमा प्रर्दशन भइरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पौष २६, २०७४ समय: ८:२९:३५